News452Online – NO 1 NEWSPORTAL IN TOWN
अन्तत पूजा शर्माले आफ्ना प्रेमी आकाश श्रेष्ठसँगको बिहेको मिति तोकिन्, इन्जगेजमेन्टमा भनिन् हाम्रो जोडीलाई एक हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैनन्, आकाशसँग म निकै खुशी छु, लकडाउन खुले लगत्तै इन्गेजमेन्ट गरेकी पूजा देखिइन् निकै सुन्दर
स्तन मसाजमात्रै यौ”न सामथ्र्यको लागि मात्र नभएर विभिन्न स्वास्थ्यमा पनि फाइदा पुग्ने अध्यनबाट खुल्न आएको छ । जब महिलाहरुले कसिलो लुगा विशेषगरी ब्रा लगाउँछन तब ब्रेस्टमा लिम्फैटिक फ्लुइडको काममा रोकावट आउँछ । जसले गर्दा ब्रेस्ट र अन्डर आम्र्समा भएको लिम्फ वा लसीका फ्लुइडलाई फेरी स्टिम्युलेट गर्नका लागि मसाज गर्नु आवश्यक छ ।
कहिलेकाहीं स्त”नमा गाँठो बन्न जान्छ यो आफैलाई थाहा हुँदैन । पछि त्यही गाँठो विस्तारै क्यान्सरमा परिणत हुन्छ । नियमित मसाज गर्यो भने आफैले गिर्खा वा गाँठो समयमा नै पत्ता लगाउनाले तुरुन्त उपचार भई खतराबाट बच्न सहज हुन्छ ।
***पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस***
लकडाउनको समयमा पनि रिमाले आफ्नो सेवा निरन्तर राखिन । परिवार बिहिन ४० जना आमा बुवा र नानी बाबुहरुलाई आश्रममा राखेर उनीहरुको सेवा मात्रै गरिनन्, बाटोमा रहेका पशुपँक्षीहरुको पनि सेवामा लागिन् । यस बिचमा उनीसँग तिता मिठा अनुभव त कत्ति छन् कति । रिमाले आँखाभरी आँशु लिएर यस्तो भनिन् ।
टर्कीमा से’नाको हे’लिकोप्टर दु’र्घट’ना हुँदा २ मन्त्री सहित११ जनाको मृ’त्यु भएको छ । दक्षिण पूर्वी टर्कीको एक गाउँमा सेनाको हे’लिकोप्टर दु’र्घट’ना हुँदा ११ जना सैनिकको मृ’त्यु भएका छ भने २ जना घाइते भएको त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । कुर्दी नागरिकको जनसंख्या धेरै भएको
बिट्टालिस प्रान्तको टाटवन सहर नजिकै हेलिकोप्टर दु’र्घट’ना भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरुले जनाएका छन् ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
१ असार, काठमाडौं । ‘नयाँ युगको शुरूआत’ भन्दै सरकारले दुई वर्षअघि शुरू गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई लिएर अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी निकै आक्रोशित छन् । खाईपाई आएको सेवा-सुविधा समेत कटौती हुने गरी कोषमा रकम लैजान खोजिएको भन्दै कर्मचारीहरूले यसको चर्को विरोध गरिरहेका छन् ।
नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले विद्यमान व्यवस्था संशोधन नगरी कोषमा सहभागी हुन नसकिने बताउँदै जबर्जस्ती गरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । संघका महासचिव हरिराज खरेल कोषले निषेधाज्ञा भएको मौका पारेर ‘दादा’ शैली अपनाएको बताउँछन् ।
कोषका कर्मचारीले व्यक्तिगत रूपमै फोन गरेर कोषमा सहभागी हुन धम्क्याउने गरेको महासचिव खरेलको आरोप छ । खाईपाई आएको सुविधा घट्ने गरी अहिलेकै कानून अनुसार सहभागी हुन बाध्य बनाउन खोजे बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरू निषेधाज्ञामै पनि सडकमा निस्कने उनको चेतावनी छ । प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा महासचिव खरेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान सक्दैनौं भन्नुको खास कारण के हो ?
यो कोष खासगरी अनौपचारिक क्षेत्रका मजदूर, जसको उपदान, पेन्सन हुँदैन, बिरामी भए उपचार खर्च पाउँदैनन्, सामाजिक सुरक्षा महसूस गर्न पाएका छैनन्, उनीहरूका लागि ल्याइएको कार्यक्रम हो । त्यतापट्टी धेरै ध्यान दिए हुन्थ्यो ।
अहिले देशमा ७० देखि ७५ लाखसम्म मजदूर अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । उनीहरूको लागि यो राम्रो कार्यक्रम हो । हामी यो सामाजिक सुरक्षा कोषको स्वागत गर्छौं । यसको कार्यान्वयन पनि इमानका साथ गरियोस् ।
अनौपचारिक क्षेत्रका मजदूरले भन्दा हामीले पहिल्यैबाट राम्रो सुविधा पाएका छौं, सामाजिक सुरक्षा पनि भएको महसूस छ । तुलनात्मक रूपमा राम्रो सुविधा पाइरहेका र समस्यामा रहेकालाई एउटै मान्नु भएन । कर्मचारी सञ्चय कोषमा बन्द गरेर हाम्रोमा आऊ भन्नु मिल्न नसक्ने कुरा हो ।
सामाजिक सुरक्षा कोष तपाईंहरूका लागि हुँदै होइन त ?
ऐन संशोधन गरेर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउने भनिएको छ । हामी जाँदै जाँदैनौं पनि भनेका छैनौं । तर, कर्मचारी सञ्चय कोषमा गइरहेको रकम उता पठाउँदा सुविधा घट्नु भएन भन्ने हो ।
सरकारको कानून हामी मान्छौं, तर खाईपाई आएको सुविधाहरू घटाउन मिल्दैन । हामी जानुपर्ने भए कि सुविधा बढ्नुपर्‍यो । नबढे पनि घट्न भएन । यी कुरा सुधार्नुस्, हामी आफैं आउँछौं भनेका छौं । खाईपाई आएको गाँस काट्ने कुरा त स्वीकार्न सकिँदैन नि !
मेलम्ची बाढीमा पर्दा पनि शिवमूर्ति सकुशल ।मेलम्चीमा बाढीबाट सुरक्षित महादेव मन्दिर । जय शम्भो १०८ !***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला
मेलम्चीमा बाढीबाट सुरक्षित महादेव मन्दिर । जय शम्भो १०८मेलम्चीमा बाढीबाट सुरक्षित महादेव मन्दिर । जय शम्भो १०८मेलम्चीमा बाढीबाट सुरक्षित महादेव मन्दिर । जय शम्भो १०८मेलम्चीमा बाढीबाट सुरक्षित महादेव मन्दिर । जय शम्भो १०८मेलम्चीमा बाढीबाट सुरक्षित महादेव मन्दिर । जय शम्भो १०८मेलम्ची बाढीमा पर्दा पनि शिवमूर्ति सकुशल ।मेलम्चीमा बाढीबाट सुरक्षित महादेव मन्दिर । जय शम्भो १०८ ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
चुम्ब*न गर्दा हाम्रो शरीरले प्रतिमिनेट २६ क्यालोरी ऊर्जा खपत गर्छ । यसको अर्थ के हो भने मोटोपन घटाउन पनि नियमित चुम्बन आवश्यक छ । एक अध्ययनअनुसार मानिसले यौ’न स’म्प’र्कभन्दा बढी चुम्बन गर्दा सम्बन्ध बढी ‘सं’वे’द’न’शी’ल हुन्छ ।कसैले कसैलाई सामान्य चुम्बन गर्दा अनुहारका दुईवटा मांसपेशी मात्र सक्रिय हुन्छन् भने फ्रेन्च किस गर्दा अनुहारका ३४ वटा मांसपेशी सक्रिय हुन्छन् ।अहिले प्रचलनमा रहेको फ्रेन्च किसको प्रारम्भ सन् १९२० मा भएको मानिन्छ ।
कुनै पनि महिला–पुरुषले सन् १९२० अघि सार्वजनिक रूपमा फ्रेन्च किस गरेका थिएनन् ।महिलाहरू चुम्बनमार्फत नै एक्साइटमेन्टको चरण पार गर्दै क्लाइमेक्सको चरणमा पुग्छन् । कतिपय मानिसमा के भ्रम छ भने यौ’निक दृष्टिकोणले ‘गु’प्तां’ग’ नै शरीरको सबैभन्दा ‘सं’वे’द’न’शी’ल’ अंग हो तर अध्ययनले के
देखाएको छ भने मानिसको ओठ वा ‘जि’ब्रो’मा गरिने चुम्बनले ‘गु’प्तां’ग’को तुलनामा १ सय गुणा बढी ‘सं’वे’द’न’शी’ल बनाउँछ ।जर्मन अनुसन्धानकर्ता ओनर गुन्टरकुनका अनुसार संसारमा २ तिहाई मानिस चुम्बन गर्दा दायाँतर्फ झुक्छन् । यसको कारण के हो भने कुनै पनि मानिस आमाको गर्भमै रहँदा दाहिने भागमा बढी सक्रिय हुन्छन् । साप्ताहिकबाट
८ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च ‘अ’दा’ल’त’को आदेशबाट पदमुक्त भएका मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णले सर्वोच्च ‘अ’दा’ल’त’को आदेश मान्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।
मंगलबार सर्वोच्च ‘अ’दा’ल’त’ले संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गरेपछि अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै जसपा नेता कर्णले ‘अ’दा’ल’त’को आदेश स्वीकार्नुको विकल्प नभएको बताए ।
सर्वोच्च ‘अ’दा’ल’त’को आदेशपछि प्रधानमन्त्रीले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी २० जना मन्त्री थप गरेका थिए । उनीहरु सबै ‘अ’दा’ल’त’को आदेशमा पदमुक्त भएका छन् ।
सर्वोच्चको आदेशका कारण प्रधानमन्त्री केपी ओलीसंगको सहकार्यमा समस्या नआउने उनले बताए । ‘फैसलाको कारणले हाम्रो सहकार्यमा समस्या आउँदैन’ नेता कर्णले भने ।
डाक्टर साब म ३७ बर्षीय बिबाहित महिला हुँ । सन्तानको रहर हामी दुवैमा औधी थियो र छ । बिबाह भएको १० बर्ष बि’त्यो। बच्चा नभएपछि श्रीमान् र मेरो दुवैको परिक्षण गर्दा श्रीमानको पक्षबाट पूर्ण रुपमा काम नगर्ने थाहा भयो । यो कुरा डाक्टरले मलाई मात्र भन्नु भएको थियो । उहाँलाई औषधिले ठिक हुन्छ रे भनिदिए ।
त्यसपछि मैले त्यो थाहा पाएपछि आफ्नै भाईसँग सम्बन्ध राखेर ब’च्चा बनाए । पछि अनुहार फरक नआओस् र श्रीमानको परिवारले शं’का नगरुन भनेर मेरो बुद्धिले यसो गरेकी हुँ । तर हा’डना’तामा बच्चा रहे सन्तान राम्रो नहुँने सुनेकी छु । मेरो भावी सन्तानमा केही समस्या आँउछकी भन्ने ड’र धेरै छ । जिज्ञासा मेटाईदिनुहोला । –श्रृष्टि
जवाफ- तपाईले अहिलेसम्म आएका भन्दा अत्यन्तै अनौठो र फरक खालको समस्या राख्नुभयो । यो विज्ञानसँग जोडिएको विषय हो । तपाईले के जान्न जरुरी छ भने स्वास्थ्य विज्ञानले एउटै गोत्रमा समेत विवाह गर्दा सन्तानमा देखिने असर औल्याएको छ । यही कारण धार्मिक रुपमा नै एउटै गोत्रमा बिबाह नि’षे’ध गरिएको हो ।
मुख्य जीन वा वंश उसको पतिको हुनेहँदा त्यो महिलाको गोत्र पनि उसको श्रीमानको गोत्रमा विलय : छोरी जन्मनुको निमित्त पिताको एक्स क्रो’मोजोम र आमाको एक्स क्रो’मोजोम मिल्नुपर्ने हुन्छ । जबकी छोरा जन्मनको निमित्त पिताको वाई क्रो’मोजोम र माताको एक्स क्रो’मोजोम मिल्न आवस्यक हुन्छ । विज्ञानले प्रमाणित गरे अनुसार स्त्रीमा केवल एक्स क्रो’मोजोम मात्र हुन्छ वाई क्रो’मोजोम हुँदैन वाई क्रो’मोजोम पुरुषमा मात्र हुन्छ ।
तसर्थ छोराको जन्म उसको बाबुको वाई क्रो’मोजोमका कारण हुन्छ र यो वाई क्रो’मोजोम क्रमशः पिताबाट छोरा, नाति, पनातिमा हुँदै एवं रितले हुँदै अघी बढ्छ । जबकी महिलाको एक्स क्रो’मोजोम र पुरुषको एक्स क्रो’मोजोम मिलेर जन्मेकी छोरी अर्कै पुरूषसँग विवाह हुँदा उसको एक्स क्रो’मोजोम अन्य वंशसँग मिक्स हुँदै जान्छ र पितातिरको एक्स क्रोमो’जोमको अस्तित्व समाप्त हुँदै जान्छ ।
जबकी पुरूषको वाई क्रो’मोजोम कसैसँग मिक्स नभइ अनवरत रुपमा अघी बढ्छ । पुरुषको जन्मको कारण वाई क्रो’मोजोम नै हो, जुन उसको पिताबाट मात्र प्राप्त हुन्छ । अर्थात पुरूषको वंश वा जिन वाई क्रो’मोजोम आफ्नो पुर्खाकोमात्र हुने हुँदा नवजात पुरुषको गोत्र उसको पिताको गोत्र कायम रहन्छ भने महिलाको गोत्र विवाहपछी उसको श्रीमानको गोत्रमा परिणत हुन्छ
किनभने त्यस महिलाबाट जन्मिने पुत्रको वाई क्रो’मोजोम उसको अथवा मुख्य जीन वा वंश उसको पतिको हुनेहँदा त्यो महिलाको गोत्र पनि उसको श्रीमानको गोत्रमा ‘विल’य भएर जान्छ । जीवविज्ञानीहरूका मतअनुसार वाई क्रो’मोजोम लाखौं वर्षसम्म पनि परिवर्तन नहुने र एउटै रुपमा रहि रहने हुँदा त्यसको सहि उर्वरा शक्ति हाँसिल गर्न फरक वंशको एक्स क्रो’मोजोम आवस्यक
यस्तो हुन गए ग’म्भि’र जैविक अ’स’र उ’त्प’न्न हुन्छ भनि जिव वैज्ञानीकहरूले भनेका छन् । उनिहरूका अनुसार एउटै गोत्रमा विवाह हुँदा केटी र केटाको जीन एउटै हुँदा त्यसबाट जन्मिने सन्तानमा केही जैविक कमि वा शारि रिक तथा मा न’सि’क वि’च’ल’न जस्तो स’म’स्या उ’त्प’न्न हुन सक्ने प्रसस्त सम्भावना रहने हुँदा पनि सगोत्री विवाह अ’स्वि’कृत गरिएको हो ।
स’गोत्री’ विवाह हुँदा वं’श’को कुल बि’ग्रन्छ’ भन्ने प्रचलन पनि वैज्ञानिक वास्तविकतामा आधारित छ ्उक्त भ’या’व’ह असरबाट बच्न सगोत्रविवाहको निषेध शा’स्त्रीय रूपमा नै गरिएको ्र गरुडमहापुराण अनुसार सगोत्रमा विवाह हुँदा जन्मने सन्तान ग’ल’त मनिन्छ्र जीवविज्ञानीहरूका मतअनुसार वाई क्रो’मोजोम लाखौं वर्षसम्म पनि परिवर्तन नहुने र एउटै रुपमा रहि रहने हुँदा त्यसको सहि ‘उर्व”रा शक्ति हाँसिल गर्न फरक वं’शको एक्स क्रो’मोजोम आवस्यक हुन्छ ।
जसरी एउटा अन्नको बिउ लगातार एकै ठाउँमा लामो समयसम्म लगाउँदा बि’ग्रिन्छ’ त्यस्तै वाई क्रो’मोजोम पनि आफ्नै वंशको एक्स क्रो’मोजोमसँग मिल्दा त्यसको सही विकास नहुने र सन्तानमा शारिरिक तथा मा न’सि’क वि’च’लन’ उत्पन्न हुने प्रवल सम्भावना रहने हुनाले विवाह फरक वंशसँग गर्दा मात्र वाई र एक्स क्रो’मोजोमको सही ढङ्गले विकास हुन पाउँछ ।
अब यति भनिसकेपछि तपाईले जन्माएको सन्तानमा के असर पर्ला तपाई आफैले जवाफ पाएको हुनुपर्छ । तपाइले त यो ग’ल्ती गर्नुभयो । अबदेखि हाम्रो समाजले मात्र हैन विश्व समुदायले नै यो ग’ल्ती नगरोस् । यो सामाग्री काठमाडौका एक प्रख्यात चिकित्सकसँग आएको जिज्ञासामा उहाँले दिएको जवाफमा आधारित जनवोली डटकमको सहयोगमा भएर तयार पारिएको हो ।